Yuweri Musaveni & Sheekh Shariif oo wada qorshe ka dhan ah gulufka dagaal ee Kenya – SBC
Yuweri Musaveni & Sheekh Shariif oo wada qorshe ka dhan ah gulufka dagaal ee Kenya
Warbaahinta dalka Kenya ayaa si weyn u hadal haysa qorshe aan si buuxda u soo shaac bixin oo ku aadan arax ka jabinta gulufka dagaal ee Kenya ku soo gashay Soomaaliya kaasi oo ay wadaan madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya & Madaxweynaha Ugandha Yuweri Musaveni.
Telefishinka caanka ah ee Nation Tv (NTV) ee dalka Kenya laga leeyahay ayaa baahiyey warbixin xasaasi ah oo uu ku sheegay in kulankii madaxweyneyaasha Soomaaliya & Ugandha ee magaalada Kampala uu ku aadanaa sidii go’doonin loo galin lahaa duulaanka Kenya ee Soomaaliya, iyadoo warka Tv-gu baahiyey uu ku sheegay in inkastoo Sheekh Shariif & Musaveni ay taageereen hawlgalada Kenya ee ka dhan ah Al-Shabaab hadana ay hoos ka wadaan qorshe ay ku xagal daacinayaan hawlgalka Kenya.
Madaxweynaha Ugandha ayaa warku sheegayaa in uu kala hadley masuuliyiin ka tirsan dawlada Mareykanka & Qaramada Midoobay in Kenya ay ku gashay Soomaaliya iyadoon wax heshiis ah ka haysan dawlada KMG Soomaaliya, waxaana la sheegay in madaxweye Musaveni uu si toos ah khadka telefoonka ugula hadley u qaybsanaha arimaha Afrika ee maamulka Mareykanka.
Inkastoo heshiis maalmo ka hor magaalada Naiorbi ku saxiixeen Ra’isalwasaarayaasha Soomaaliya & Kenya Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) & Raila Odinga hadana Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ilaa iyo hada si cad uma muujin mowqifka heshiiska uu saxiixay Ra’isalwasaarihiisa, iyadoo warar aan si buuxda shaaca looga qaadin ay sheegayaan in uu jiro mugdi ku kala dhex jira Gaas & Shariif.
Laakiin Ra’isalwasaare Cabdiwali Maxamed Cali isagu madashii shirkaasi lagu saxiixayey wuxuu ka cadeeyey in uu qalinka ku duugayo heshiiska Kenya & Somaaliya isagoo wakiil ka ah madaxweynaha uuna u yimid halkan amarkiisa iyo qorshahiisa.
Shariff waqtigisi waa dhamaaday waxaa layiri neef lagowracay geedokamawaabto